News Feed Archives | Page 16 of 41 | Frontier Myanmar
ပုဂ္ဂလိကစတော့ရှယ်ယာကုမ္ပဏီ Ascent Capital က ထူထောင်လိုက်သည့် မြန်မာနိုင်ငံအား အဓိကထားသော ပထမဆုံး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေအတွက် စင်ကာပူနိုင်ငံပိုင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေ Temasek နှင့် အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်တို့က ငွေကြေးပံ့ပိုးထားသည်။ ကလဲရ် ဟမ်မွန် ၂ဝ၁၃ ခုနှစ်တွင် မစ္စတာလင်ချုန်းချုန်းကို ၎င်း၏ အလုပ်က တာဝန်တစ်ခုဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ စေလွှတ်ခဲ့သည်။.
ကတ်စနစ်ဖြင့် ဘတ်စ်ကားခ ပေးချေသည့်စနစ်အား ခြောက်လအတွင်း အသုံးပြုနိုင်မည်
ဆုမြတ်မွန် ရန်ကုန်မြို့ အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်ဖြစ်သည့် ရန်ကုန်ဘတ်စ်ကားစနစ် (YBS) တွင် ယာဉ်စီးခကို ကတ်စနစ်ဖြင့် ပေးချေသည့်စနစ်အား ခြောက်လအတွင်း အသုံးပြုနိုင်မည်ဟု ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက ပြောကြားသည်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှု အာဏာပိုင်အဖွဲ့ (YRTA) ၏ ၂ နှစ်ပြည့် အခမ်းအနားအား ရန်ကုန်မြို့၌ ယနေ့.
Mytel က အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်သစ် ပြောင်းလဲခန့်အပ်
မြန်မာနိုင်ငံ၏ စတုတ္ထမြောက် ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာဖြစ်သည့် Mytel က Mr. Nguyen The Nghia ကို အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်သစ်အဖြစ် ခန့်အပ်လိုက်ကြောင်း ယနေ့ သတင်းထုတ်ပြန်သည်။ Mytel မြန်မာ၌ နည်းပညာအမှုဆောင်အရာရှိချုပ်အဖြစ် စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့် ၎င်းသည် ဗီယက်နမ် မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီသို့ ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး.
ကန်တော်ကြီးဘေးတွင် ဈေးဝယ်စင်တာနှင့် နိုင်ငံတကာ ဇိမ်ခံဟိုတယ်သစ်ဖွင့်လှစ်
အထပ် ၂၀ မြင့် နိုင်ငံတကာ ဇိမ်ခံဟိုတယ်နှင့် ဈေးဝယ်စင်တာ၊ ရုံးခန်းများနှင့် နေအိမ်ခန်းများ ပါဝင်သော Kantharyar Centre ကို ဇန်နဝါရီ ၈ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့၊ ကန်တော်ကြီးဘေးတွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ရာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်း တက်ရောက်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့သည်။ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၂၀၀ ရင်းနှီးမြုပ်နှံထားသည့် အဆိုပါစင်တာကို The Asia.